Warshaan Biqilaa Asallaa kun gonkumaa harka qonnaan bultoota Oromiyaatii bahuu hin qabu. Kanarratti ummanniifi MNO ciminaan hojjachuu qaban. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosWarshaan Biqilaa Asallaa kun gonkumaa harka qonnaan bultoota Oromiyaatii bahuu hin qabu. Kanarratti ummanniifi MNO ciminaan hojjachuu qaban.
Warshaan Biqilaa Asallaa kun gonkumaa harka qonnaan bultoota Oromiyaatii bahuu hin qabu. Kanarratti ummanniifi MNO ciminaan hojjachuu qaban. Didanii gurgurraan abbichi bitu akka kasaaru ammumaan ibsuufi feesisa
Qeeroon Godina Qeellem Wallaaggaa Aanaa Daallee Waabaraa Magaalaa Qaaqee ,bareessaa Partii KFO Godina Qeellem Walkaggaa Obbo Gammachuu Shaanqoo hanga Magaalaa Haroo Sobbuutti deemanii haala kanaan simatanii fudhatanii galaa jiran.Har’a Magaalaa Qaaqeetti simannaa ho’aatu goota kanaaf taasifama.Boru immoo Magaalaa Dambidoolloottis simannaa ho’aa taasisuuf uummanni Dambidoolloo qophiitti jiran.Tokkummaan humna.Qabsoon itti fufa!!
Qeerroo Qaaqee irraa!!
Basaastoonni TPLF Amboo keessaa baqachuu eegalanii jiru. Deeggartooni TPLF Dalootaan Tigry ta’an Amboo keessaa bara dheeraaf jirachaa turan Amboo sidaaranii baqachuu calqabanii jiru.
Hojii basaassumma irraattii TPLF deeggaranii opdo of jala hiriirsuun oromoota heddu hiisisaa fi ajjechaa warreen turani dha.Yaroo darbe Abbooyi kan jedhamu basaasaan TPLF Qeerroon mana isaa seenuun miidhaa guddaa irraa ga’ee akka ture ni yaadatama.Kanuma sodaachuun Barsiisaa kan ture Birane G/Tsedik kan jedhamu Basaasaan TPLF amma eega magalaa Amboo dlakkisee badee ji’aa 2 ol ta’ee jira.Warreen hafanis qabeenya isaanii gurguranii deemuuf gabaa kan itti barbaadaa jiran yoo ta’uu kan irraa bitu dhabanii rakkachaa jiru.Oromoon qabeenya isaanii bitu yoo jiraate booddee rakkoo keessa akka galani beekanii akka irraa of qusatan Qeerroon dhaamsa dabarsaaf ture.
Via: Dejene Gutema
AkeeKachisa Qeerroo Burayyuu irraa.Casaan TPLFn gegefamu casaan muktar kadiri fi Aster mamo OPDO kessatti
1.dhabaa jifensa /kantiba magala burayu kanturee fi masfin dadhi/wadi hagos waldatsadiq/ittigafatama wajjira barnota bulchinsa magala burayuu kanture akasumasi Abdisa dhugumaa hoganaa wajira barnotaa tae amma kanjiruufi baajeta barnotaaf,barsisotaa fi hojatota sectarichaa mancasuudhaan barsisota bochisaa kan jiru.
2. Bahayilu girmaa aanaa walmararatto maqaa ABOtin oromota holotaratti loltota wayaneetin ajechisisa kan turee fi amma godina addara ittigafatama misomaa irra kan jiru/hadhanis abbanis saba tigreti/ namni kuni gaafa guyaa 16/5/2010 burayuti dhufudhaan walgaii mana koloneli wayanee high schooli gaditi argamu kessatti walgaii ademsisuudhan dhalotan saba biraa namota tani akka qindesani ijarani fi hojiin mastar pilaniitis cimee ittifufe kan hojira olu tausaa ,yaada kanas labinee EPRDFirra qajelfama gadibue tausaa jalamuruudhaan ibsee jira.
walgaii kanaratti wajira barnotaa burayuu kessa namoni sadi ,barsisota kessa 16/oromota wara hintane/ waajjira fayinansii kessa moni 7 hirmachuu isanii odeffannooni qabatamaan achiratti wara hirmatanira argame adese jira kanamales torbee dhuftuu egalee maqaa lenjii afaan ingiliffaa jedhuni bushofturati harkawayaa jalatin dhimma masterpilanii hojira olmaa isaa lenjin kenamuuf haldureen namota lenjin kenamuuf bushoftuti emalaa jiravhunisas bekame jira !
Lanumaan walqabatee master pilaanii cinati sirni afaani fi enyummaratti hundefamee digamee tesuma lafaatin tauu akka qabu OPDO fi BIADENIN waligaltera gahamee jirachusaati fi yeroo gababaa kessatti hojiti senuf waligalamuu isanii mirkanefanee waanjiruf dhimma kana qaamni dhimmi ilalu qeroni ,dhabilen soyasaa,ummani orompo fi activistoni fi hayoni dirsanii xiyeffannoo akka ittilatani dhamsa kana nuuf dabarsaa adaraa.
kessumatuu waaee master pilaanii ilalchisee oromiratti fiqaduu Tasamaa ittigafatamaa ijarsa soyasa magaloti oromiyaa addadureen hojira olchuuf hojachaa kan jirufi bahayiluns ergamasa qabatee godina addara nanawaa kanjiru tausaa bekame jira